भोलि फाल्गुन १५ गते शनिबार ,कस्तो रहला तपाईको दिन ,हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल !
उग्र स्वभावमा ध्यान राख्नुहोला। मानसिक थकान अनुभव गर्नुहुनेछ। अधिक मिहिनेतको तुलनामा फलको कम प्राप्त हुनेछ। सन्तानको बारेमा चिन्तित रहनुहुनेछ। अधिक कामको व्यस्तताको कारण तपाईले परिवारप्रति कम ध्यान दिनुहुनेछ। यद्यपि सरकारी काममा सफलता मिल्नेछ ।
कुनै कार्य दृढ मनोबल र आत्मविश्वासका साथ गर्दा सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। पुर्खा पक्ष बाट लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। विध्याअभ्यासमा विद्यार्थीको रुची रहनेछ। सरकारी काममा आर्थिक सफलता पाउन सक्नुहुन्छ। बच्चाहरूको लागि लगानी गर्नुहुनेछ।
नयाँ योजना सुरु गर्नका लागि अनुकूल दिन रहको छ। सरकारी लाभहरू र कामको सही नतिजा उच्च अधिकारीहरूबाट प्राप्त गर्नुहुनेछ। वैचारिक रूपमा, परिवर्तनको सम्भावना रहेको छ । आर्थिक मामलामा होशियार हुन जरुरी रहेको छ।
नकारात्मक दृष्टिकोणले व्यवहार नगर्नुहोला। शारीरिक र मानसिक रूपले स्वस्थ अनुभव गर्नुहुनेछ। निराशा र असन्तुष्टिको भाव रहनेछ। परिवारको सदस्यसँग अलमल्लमा नपर्नुहोला। विद्यार्थीले अभ्यासको अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्नेछन्। अनैतिक प्रवृत्तिबाट टाढा रहनुहोला।
आत्मविश्वास हर्षोल्लासले भैपूर्ण रहनेछ। कुनै कार्य गर्न छिटो निर्णय लिन सक्नुहुन्छ। पिता तथा ठुला व्यक्तिबाट फाईदा हुनेछ। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्न सक्छ। बोली र व्यवहारमा ध्यान राख्नुहोला। रिसको मात्रा बढ्नेछ। स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ।
शारीरिक थकान र मानसिक तनाव अधिक हुनेछ। कसैसँग मनमुटाव हुनेछ। क्रोधको मात्रा अधिक रहनेछ। पैसा धार्मिक कार्यहरूमा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला। पैसा खर्च हुन सक्छ।
दिन शुभफलदायी रहनेछ। विविध क्षेत्रमा भएको लाभले प्रसन्न रहनुहुनेछ। आयमा वृद्धि हुन सक्छ। मित्रबाट लाभ र पैसा खर्च हुन सक्छ। स्त्री मित्रसँग भएको भेट आनन्ददायी रहनेछ। विवाह उत्सुकले चाहे जस्तो जीवनसाथी प्राप्त गर्नेछन्।
दिन शुभफलदायी रहेको छ। व्यवसायिक स्थलमा वातावरण अनुकूल रहनेछ। उच्च अधिकारी तपाईप्रति प्रसन्न रहनेछन्। हरेक कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछ। तपाईको मान-प्रतिष्ठा वृद्धि हुनेछ। पेसामा पदोन्नति हुन सक्छ। गृहस्थजीवनमा सन्तानको प्रगतिले सन्तोष अनुभ्हाव गर्नुहुनेछ।
स्वास्थ्य स्वस्थ रहनेछ। शारीरिक रूपले आलस्य र अशक्तिको अनुभव हा सक्छ। मनमा व्यग्रता रहन सक्छ। व्यवसायिक स्थलमा बाधा उत्पन्न हुनेछ। संकटजनक विचार वा व्यवहारबाट टाढा रहनुहोला। विरोधिसँग वादविवाद नगर्नुहोला।
अचानक पैसा खर्च हुने योग रहेको छ। खर्च स्वास्थ्यको कारण पनि हुन सक्छ। व्यवहारिक वा सामाजिक कार्यको लागि बाहिर जानुहुनेछ। खानामा ध्यान दिनुहोला। रिस र नकारात्मक विचारमा ध्यान राख्नुहोला। काम वा व्यवसाय मा अनुकूलता रहनेछ ।
प्रणयको रहेको छ। कार्य दृढ मनोबल र विश्वासका साथ गर्नुहुनेछ। राम्रो खाना लगाएर नयाँ लुगा लगाउने सन्दर्भ अवस्थित रहनेछ। सहभागितामा लाभ हुनेछ। सवारी साधन उपलब्ध हुनेछ।
लिए शुभफलदायी रहेको छ। तपाईको मनोबल र आत्मविश्वासमा दृढ़ताको अनुभव हुनेछ। शारीरिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। घरमा सुखशान्तिको वातावरण रहनेछ। स्वभाव र व्यवहारको उग्रतामा ध्यान राख्नुहोला। माईतबाट समाचार आउन सक्छ।
प्रकाशित : शुक्रबार, फागुन १४, २०७७२१:११
आज फाल्गुन १५ गते शनिबार,कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् आजको राशिफल !